Oromo Quran - Android app on AppBrain
All apps > Education > Oromo Quran
Aug 15, 2012 New App Version 1.2 in Education for Free
Oromo quran is a free quranic application by oromo language. Alhamdulliha, now we are able to add one Juz making total of Two juz, Insha Allah we will keep updating the number of Chapters(juz)as soon as possible. Please make Du'a so that we can to produce full android Quran by oromo language.
The tafsiir was done by sheik Abdi Hussein, Juza 'amma was transcribed by Adil Osman while tabaraaka was transcribed by Feysel Mustefa.The Arabic font comes from tanzil.net and XML file was generated by Ahmed Oumer.We have tried our level best to remove any mistake, but if you have noticed any error or spelling mistake please let us know.([email protected],[email protected])
Du'aa'ii teeysan gaggaariidhaan nu hin irraanfatinaa.
Juuzni tabaarakaatiis itti ida'ame jira.
abdi adil alhamdulliha amma baaburayyaan feysel gaggaariidhaan hin hussein insha irraanfatinaa juz juza mistake mustefa oromo oromoquran osman quran sheik tabaraaka tafsiir teeysan transcribed xml
allaaah allaah allah galatoma haa jzk masha mashaa rabbi rabbiin
allaah allah haa jzk maasha masha mashaa quraana rabbi rabbiin
ada afan allaaah allah bayee galatoma masha mashaa walahii wayyii
Holy Quran In Oromo
More from Harar Tech
Zikr in Oromo